August 09, 2016 – Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya, mudane Cabdi Salaan Cumar Hadliye ayaa maanta warqadihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka Dowladda Mareykanku ay u soo magacawday dalka Soomaaliya Mr.Stephen M. Schwartz.
Stephen M. Schwartz ayaa warqadaha aqoonsigiisa ku wareejiyay Wasiir Hadliye, sheegayna inuu rajeynayo inuu dhawaan la kulmo madaxweynaha dalka Soomaaliya.
Intii ay munaasabadda Is barashada socotay ayuu danjiraha dalka Mareeykanka Mr.Stephen M.Schwartz sheegay in Magacaabidiisu ay ka dhigan tahay Adkeeynta Xiriirka Soomaaliya iyo Mareeykanka.
Schwartz waxaa uu intaas ku Daray in uu Ka qeyb qaadan Doono Dib udhiska, Adkeeynta Amaanka, Maamul wanaagga iyo Kobcinta Dhaqaalaha islamarkaanna uu Dowladda Soomaaliya ka caawi doono Hirgalinta iyo Adkeeynta Democratic-yadda.
Safiirkan Cusub ee Mareeykanka ayaa noqonaya Safiirkii ugu Horreeyay ee Dowladda Mareeykanku ay u soo Magacaawdo dalka Soomaaliya mudo hadda laga joogo 25 sano, xiligaasi oo aay Bur-burtay dowladii dhexe ee Soomaaliya.
August 9, 2016 tuugahaladilo2015